Global Voices teny Malagasy » Fahafatesana Sy Rivotry ny Hadisoam-Panantenana Tao Donetsk sy Gaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jolay 2014 18:38 GMT 1	 · Mpanoratra Sean Guillory Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Israely, Okraina, Palestina, Rosia, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Voina, Akon'ny RuNet
Ny Alakamisy 17 Jolay, nisy zava-nitranga natao lohateny lehibe tamin'ny gazety : ny fianjeran'ny sidina Maleziana MH17, nambara ho nataon'ireo mpitaky fizakantena ao atsinanan'i Okraina, ary ny fiandohan'ny fanafihana an-tanety nataon'i Israely tao amin'ny Lemak'i Gaza. Raha nahasarika be ny saina taty anaty aterineto Rosiana iry voalohany, ito farany kosa somary niniana natao tsy dia nahataitra loatra. Misy antony mazava ny mahatonga an'io. Tao amin'ny tany Rosiana no nianjera ny MH17, ary ny hoe i Maosko no mety namatsy ilay bala afomanga dia ampy naha-teo amin'ny pejy voalohany an'ilay vaovao. Sady koa, ny totoafon'ny media ao Rosia, izay miezaka mitrandraka  ny mety ho teorian'ny tetidratsy rehetra mba hamafazana fisalasalàna amin'ny mety ho maha-meloka ireo mpitaky fisintahana sy i Maosko, dia mety hampiredareda tsara ny adihevitra ety anaty aterineto momba ilay loza mahatsiravina.
Tsy dia mampientanentana loatra toy ny raharaha MH17 ny olana misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana. Mifandrohy ankolaka amin'ny tombontsoa Rosiana fotsiny ihany io, ary raha toa i Putin manana fanohanana manokana an'i Israely , tsy ho tonga hatrany amin'ny fanohanana ny ady ataon'ny fanjakana Jiosy amin'ny Hamas kosa. Ny marina, ny famakiana amin'ny fo tony ny fandrakofan'ny RT (Russia Today) ilay fifandirana dia mametraka an'i Rosia indrindra indrindra ho any amin'ny lafy Palestiniana. Ary koa, mora raisina ho toy ny fihodinana farany eo amin'ny herisetra anatin'izao fifanolanana tsy misy farany izao ny fivezivezena mandroso sy miverina eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana. Na eo aza ny fiakaran'ny isan'ny maty any amin'ny lafy Palestiniana (tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, 620 ny tarehimarika), vitsivitsy tamin'ireo mpampiasa ny RuNet no nanoratra fanehoankevitra mba misy lanjany.
Ankilan'ireny bitsika ireny sy ireo lohateny vaventy, tsy ny rehetra,mazava loatra, no mitanisa ny fahafatesana avy amin'ny lafy Israeliana. Raha te-hahazo fanavaozam-baovao avy amin'ny fomba fijery Israeliana, azon'ireo mpampiasa amin'ny fiteny Rosiana atao ny manaraka ny fàhana Twitter avy amin'ny kaonty ofisialin'ny Hery Fiarovana Israeliana, @Tsahal_Rus  amin'ny teny Rosiana. Ao ianao no mahita ireo bitsika toy ity manaraka ity :
Manontany i  Vladimir Vladimirov, iray hafa mpampiasa Vkontakte :
Tsy saro-tadiavina ny hanihany ratsy ety anaty Tranonkala, ary tsy afa-bela amin'izany ireo vaovao avy ao Okraine sy Gaza. Amin'ny filalaovana ny teny Rosiana hoe entona (“gaz”) sy ny dika ara-bakitenin'ny hoe Lemak'i Gaza amin'ny fiteny Rosiana (“ny sehatry ny entona”), nivazivazy  ireo mpampiasa sasany,
Tsy ny rehetra no lokin'ny hehy tamin'ny raharaha 17 Jolay. @isma_mustafaev  nibitsika hoe :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/23/62324/
 manana fanohanana manokana an'i Israely: http://www.themoscowtimes.com/news/article/despite-his-sympathy-putin-is-unable-to-support-israel-against-hamas/503466.html
 manoratra hoe : http://www.echo.msk.ru/blog/osherov/1361204-echo/
 nanoratra i : http://vk.com/wall2395926_8432
 Manontany i: http://vk.com/wall8400316_3699
 nibitsika hoe: https://twitter.com/isma_mustafaev/status/490233165081239553